Umlobi weMadoda Ulahlekele Iirekhodi zehlabathi
Midlalo Okukhethiweyo kunye neeRekhodi
Umdlalo weentambo uphonsa imihla kwixesha elidala lamaGrike namaRoma , kodwa ekubeni iirekhodi zanamhlanje zigcinwe, abalahla emazweni aseScandinavia baye babeka iingxelo zehlabathi zeentambo zamajaji kunamanye amazwe.
Imfazwe yePhambi kweMfazwe II
Ukusekwa kwerekhodi kwaqala ngowe-1912, xa i-IAAF ivumelanise isigidimi sayo sokuqala samadoda ukuphonsa irekhodi yehlabathi. U-Eric u-Eric Lemming nguye owayengumnini-rekhodi emva kokuba ephosa umkhonto ngamamitha angama-62.32 (ii-204 inches, 5 intshi) eStockholm, kungekudala emva kokuwina i-medal yegolide ye- Olympic ye-javelin .
Ngaphandle kokuba igama likaLimming lisezincwadini, i-IAAF ayingenakuyitshintsha iminyaka engama-7, kwaze kwaba yilapho iFinland uJonni Myyra - enye ididistri yegolide ye-Olimpiki ephindwe kabili - ilahle i-66.10 / 216-10, nayo i- Stockholm ngo-1912 .
I-Swedes kunye neFomns batshintshana isihloko nakuma-1920s, ngokuqala nge-Gunnar Lindstrom yaseSweden ngo-1924, emva koko i-Eino Penttila yaseFinland ngo-1927 no-Erik Lundqvist waseSweden ngowe-1928. I-Lundqvist yiphosa i-70-meter imitha ephosa phambili, ifikelela kuma-71.01 / 232 -11 nje emva kokuba athole imali yegolide yeOlimpiki. UMatti Jarvinen waseFinland, iqela le-Olympic javelin elizayo, ubeke iirekodi ezine zehlabathi ngo-1930, ukuphuma kwi-72.93 / 239-3. Waqhubeka nokuhlaselwa kwincwadi yakhe ngokukwandisa umhlaba wakhe ngo-1932, ngokuphindwe kathathu ngo-1933, kanye ngo-1934 kunye kwakhona ngo-1936, ukuphuma kwi-77.23 / 253-4. Omnye uFinn, uYrjo Nikkanen, waqhekeza uphawu lwehlabathi ngokuphindwe kabini ngowe-1938, wafikelela kwi-78.70 / 258-2 kwintlanganiso yaseKotka, eFinland.
I-Post-War Records yeJavelin Records
Ingxelo kaNikkanen yahlala iminyaka engama-15, kwaye yashiya iYurophu ngokokuqala ngqa njengoko i-American Bud Held yaqhekeza umqobo wee-80 wemitha ngo-1953 ngokukhwela ukulinganisa i-80.41 / 263-9. Uphuculise umgangatho ongama-81.75 / 268-2 ngo-1955 ngaphambi kokuba u-Soini Nikkinen abuzise ngokufutshane ingxelo kwiFinland kunye nomzamo we-83.56 / 274-1 ngoJuni ka-1956.
Kwiintsuku ezintandathu kamva, i-Poland yaseJapan, uJanusz Sidio, yaphula ingxelo kaNikkinen, kwaye uEoril Egil Danielsen waseNorway waba ngumntu wokuqala ukubeka iikopi zomhlaba weentambo kwiiOlimpiki, ethatha imali yegolide ye-1956 ngokulinganisa ukulinganisa ama-85.71 / 281-2.
Iirekhodi zeentambo zanyuka ngokuphindwe kathathu kwiminyaka eyisibhozo ezayo, njengo-American Albert Cantello (1959), uCarlo Lievore wase-Italy (1961) kunye ne-Norway iTerje Pederson (ngo-1964) bonke bahamba phambili kumqondiso, owafika kuma-87.12 / 285-9. U-Pedersen wabuyela kwi-90-meter barrier kamva ngo-1964, waphosa umkhonto 91.72 / 300-11 e-Oslo.
UJanis Lusis weSoviet Union wagxotha umgangatho ophezulu phezulu ngaphambi kokuwina igolide yeOlimpiki ye-1968. U-Jorma Kinnunen waseFinland waphakamisa uphawu kulo 92.70 / 304-1 kunyaka olandelayo, kodwa uLusis waphinda wafumana irekhodi ngo-1972 ngokuphonsa u-93.80 / 307-8. I-West Germany i-Klaus Wolfermann, i-Olympic iqhawe lika-1972, yaqhekeza ummandla wehlabathi ngo-1973 kwaye yabamba iminyaka emithathu ngaphambi kokuba uMongameli uMiclos Nemeth abeke umgangatho omtsha kuma-Olimpiki e-1976 eMontreal, efikelela kuma-94.58 / 310-3. Uhlobo lwesiHungary uFerence uParagi waqhubela phambili irekhodi ukuya ku-96.72 / 317-3 ngo-1980. UTom Petranoff waba ngowama-America wesithathu ukuba abambe i-epivilin irekhodi yehlabathi xa afinyelela kwi-99.72 / 327-2 ngo-1983, kwaye u-Uwe Hohn waseMpuma waseYurophu wabhidliza i-100-meter ngokuhambelana nokuphonsa u-104.80 / 343-10 ngo-1984.
Ngenxa yokuba umkhonto wawusongela ukundiza ngaphaya kwemimandla ephosa, kwaye ngenxa yokuba imicu eninzi yayigubungela, kunokuba ibambe iqhosha lokuqala-mhlaba, i-IAAF yazisa umkhonto omtsha ngo-1986 owawunzima kakhulu kwaye unobuncwane obuthathaka ngakumbi inguqu yangaphambili. Ingxelo yehlabathi yomkhonto ibuye isetyenziswe kwakhona, kunye nomqondiso wokuqala owamkelwayo ukuya ku-Klaus Tafelmeier waseNtshona Jamani, ngokukhwela ukulinganisa u-85.74 / 281-3 ngethuba lokuhlangana e-Italy. Umculi osemncinci waseCzech ogama lakhe linguJan Zelezny wathintela iincwadi zokurekhoda okokuqala ngunyaka olandelayo, kwaye i-87.66 / 287-7 yakhe yazama ukusinda iminyaka emithathu.
Ingxelo yehlabathi yaphulwa ngamaxesha amane ngo-1990 - kabini nge-Great Britain yaseSt. Steveleyley kunye nanye ngeZelezny noPatrik Boden waseSweden. U-Seppo Raty waseFinland wawabetha kabini ngo-1991.
Kamva ngo-1991, ke, i-IAAF yayinqabela umsila onogxobhozo owenziwe kwezinye iinjubha zonyaka odlulileyo, okwenza iimbondo zibe zi-aerodynamic. Zonke ukuphosa ukurekhodwa kwerekhodi ezenziwe ngemisila enomsila zacinywa kwiincwadi, ngoko umatshini wehla ukusuka kwi-Raty 96.96 / 318-1 ukuya ku-Backley ka-89.58 / 293-10. I-backley yaphucula uphawu kumanqaku angama-91.46 / 300-0 ngo-1992, kodwa uZelezny wabuyisa irekhodi ngokuphonsa u-95.54 / 313-5 ngo-1993. UZelezny waphucula umgangatho kamva ngo-1993, kwakhona kwakhona ngo-1996, xa ebeka (ngo-2016) irekodi yehlabathi ka-98.48 / 323-1. UZelezny wayeneminyaka emfutshane engama-30 ubudala xa ebeka ingxelo yakhe yokugqibela, edibanisa eJena, eJamani.
UDavid Rudisha: Umgcini-mboleko wehlabathi kwi-800 wamitha
IiRekhodi zehlabathi zeMitha ezili-100
Amamitha angama-100 eMantri yamaModliki
Ngo-1904 I-Olimpiki yoMkhondo weeMidlalo yeeMidlalo kunye neNgingqi
I-Veronica Campbell-Brown: I-Double Winner kwi-200 Meter
I-Mile Women's Fastest Mile: USvetlana Masterkova
Inombolo yesiJamani kunye nokubala 21-100
Iingoma ezi-10 ezilungileyo kakhulu zelizwe malunga noBawo noBawo
Ukukhawuleza kwesimo: Gcina kulula
I-Gemini-Sagittarius Moon Iimpawu kwiKhadi lokuzalwa
Umsila kunye neTale
Iinguqu zokuguqulwa kwemibuzo yovavanyo
Ingaba Kuyimfuneko Kubantwana Ukuba benze Umsebenzi Wasekhaya?